Maitiro Ekuwedzera Yako Arhente SeCollaborator Kune Yako Shopify Chitoro | Martech Zone
Usambofa wakapa zvitupa zvako zvekupinda kune ako mapuratifomu kune yako agency. Pane zvinhu zvakawandisa izvo zvinogona kukanganisika kana iwe ukaita izvi - kubva pakurasika mapassword kuti uwane ruzivo rwavasingafanirwe kuve narwo. Mazhinji mapuratifomu mazuva ano ane nzira dzekuwedzera vashandisi kana vanobatsirana kuchikuva chako kuitira kuti vagone kugona uye vagokwanisa kubviswa kana masevhisi apera.
Shopify inoita izvi nemazvo, kuburikidza neayo mubatsiri kuwana kwevamwe. Iko mukana wevabatsiri ndeyekuti ivo havawedzere kune yako ane rezinesi mushandisi kuverenga pane yako Shopify chitoro, chero.
Gadzira Shopify Collaborator Access
Nekutadza, chero munhu anogona kukumbira mukana wekuve mubatsiri pane yako Shopify saiti. Heano maitiro ekutarisa ako marongero.
Enda kune Settings.
Enda kune Vashandisi uye Mvumo.
Pano iwe unowana iyo Vanoshanda chikamu. Iyo yekumisikidza yekumisikidza ndeyekuti chero munhu anogona kutumira anoshanda wewachikumbiro. Kana iwe uchida kudzora kuti ndiani anokumbira mushandirwi kuwana, unogona zvakare kuseta kodhi yekukumbira senzira.
Ndizvozvo zvese zviripo kwazviri! Chitoro chako cheShopify chakamisikidzwa kuti chigamuchire zvikumbiro zvevashandi kubva kune yako agency vanogona kunge vachishanda pane zvemukati, madingindira, marongero, ruzivo rwechigadzirwa, kana kunyangwe kubatanidzwa.
Sangano rako rinofanira kumisikidzwa se Shopify Partner uyezve ivo vanokumbira mushandirwi kuwana nekupinda yako yakasarudzika Shopify (yemukati) chitoro URL uye zvese mvumo dzavanoda:
Kamwe kana agency yako yatumira chikumbiro chavo chemubatiridzi, iwe unozogamuchira email uko kwaunogona kuongorora nekuvapa mvumo. Paunenge iwe wabvumidza iyo yekupinda chitoro, vanogona kusvika kubasa!
Tags: kuwana agencymubatsirizvidzidzoshopifyShopify mushandiShopify shamwariShopify vadyidzaniShopify mushandisiShopify mvumo yemushandisiShopify vashandisimvumo yemushandisi